Rasmi: 1921, Kaalakandi iyo Mukkabaaz maalinta kowaad ganacsiga ay sameeyeen wadar ahaan 3 Crore ayay soo xareeyeen! – Filimside.net
Rasmi: 1921, Kaalakandi iyo Mukkabaaz maalinta kowaad ganacsiga ay sameeyeen wadar ahaan 3 Crore ayay soo xareeyeen!
Sedexda filim ee tiyaatarada ku cusub 1921, Kaalakandi iyo Mukkabaaz ganacsi bur bur ku dheehan ayay maalintooda kowaad sameeyeen madaama wadar ahaan 3 Crore ay soo xareeyeen.
Waxaana niyad jab ah in sedexdaan filim 1921, Kaalakandi iyo Mukkabaaz la siiyay 3000 oo tiyaatar hadana la waayay dad uso daawasho tagaan.
Zareen Khan filimkeeda 1921 ayaa ugu roonaa kaasi oo maalintiisa kowaad keenay 1.50 Crore (Trade Figure) sida shabakada BOI soo daabacday, weliba tiyaatarada Multiplex gelinka dambe ayaa la saaray meshaasna 35 Lakh ilaa 40 Lakh ayaa kaga luntay.
Xitaa hadii 1921 maalintiisa kowaad uu 2 Crore keeni lahaa wax micno ah ma sameyn laheyn waayo qaybihiisii hore ayaa ka bilaabasho wanaagsan 1920 – Evil Returns oo 3.50 crore maalintiisa kowaad keenay 2012 iyo 1920 – London oo maalintiisa kowaad 2.50 Crore keenay.
Saif Ali Khan filimkiisa Kaalakandi maalinta kowaad 1 Crore (Trade Figure) ayuu keenay mana la sugaayo ganacsi kale oo buuran madaama Mumbai iyo Pune uu ka gadmay maalintiisa kowaad, kani wa Disaster kale oo Saif culeeska kusii badinaayo!
Filimka Mukkabaaz isagana maalintiisa kowaad 75 Lakh ayuu keenay kaliya gobolka UP iyo gobolada kale Waqooyiga ayuu ku yara roon yahay laakiin ma ahan filim meel gaarayo.
Sidaa darteed sedexda filim ee masraxa ku cusba maalintooda bur bureen waxay faa’iido weyn ugu jirtaa filimka Tiger Zinda Hai oo maal maha sabtiga iyo axada qoysaska usoo daawasho tagi doonaan mar hadii mashaariicda cusbaa la iska diiday.
Waxaa Aqrisay 402